Miyaad ku dhimatay da '? Waa hagaag, maandooriye gaboobaya oo aan shaki ku jirin oo ah midka ugu kalsoonida leh ee lagu baddalayo saacaddaada noolaha. Fiiri dhinacyada muhiimka ah ee Nicotinamide Mononucleotide (NMN), kaalinteeda ku saabsan xusuusta, iyo sida loo helo daaweynta.
Phcoker waa soo saare xirfadle ah si loo soo saaro budada Nicotinamide mononucleotide (NMN)
Koritaanka gabowga waa lama huraan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira suuragal ah in lagu celiyo nidaamka da'da oo isticmaalaya Nikotinamide Mononucleotide. Fardahaaga ku hay sababta oo ah waxaan ku siinayaa macluumaad dhamaystiran oo ku saabsan sida maskaxdu u shaqeyso unugyada aadanaha.
Timaha guduudan waxay u dhigantaa xigmad!
Tani waxay aaminsan tahay inay tahay waxa ugu fiican ee aad ku hadli karto. Si kastaba ha noqotee, dhoola-gaaga ayaa noqon doona mid gaaban oo aad ku nooshahay markaad bilawdo bararka maqaarka oo dhan. Maxay tahay, waayeelku waxay saameeyeen hawlaha jirka iyo garashada.
Aynu wajahno. The anti-gabowga kareemada wajiga iyo qalliinada la isku qurxiyo ayaa wax ku jiray qarnigan casriga ah. Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato ayaa ah in nidaamyadan ay yihiin kuwa muddo-gaaban ah ayna u badan tahay inay kiciyaan saameyn daran
Dhaqan ahaan, waa inaad la dagaallantaa gabowga marka hore fahamto geedi socodka gacanta iyo jir ahaaneed ee door ka ciyaara xaaladaha da'da la xiriira. Kadibna, way sahlan tahay in la gooyo farsamooyinka la dagaallanka xasaasiga ah. Noocista antiotinamide Mononucleotide wuxuu u shaqeeyaa dib u soo celinta dhalinyarada.
Dhammaanteen waxaan dooneynaa inaan si daacadnimo ah u saxno, sax ah? Waa hagaag, xaqiiqadani waxay u muuqan kartaa wax aan fiicnayn marka jirkaaga uu sii wiiqmayo, waxaadna ujirtaa inaad noqoto magnet dhammaan noocyada cudurrada wadnaha, Alzheimers, xusuus la'aanta, iyo waxyaabo kale oo badan.
Qarsoodi Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Sidaa darteed, waa maxay cirridka oo dhan oo ku saabsan Nicotinamide Mononucleotide? Aan sharaxo.
NMN waxaa ku jira foomamka Alfa (α) iyo beta (β). Si kastaba ha ahaatee, β-NMN waa qaabka ugu firfircoon. Nucleotide bioactive waa mid dhexdhexaad ah biosynthesis of nicotinamide adenine dinucleotide ama NAD +.
Goobtan ayaa si dabiici ah u jirtaa avokadoes, yaanyada, qajaar, kaabajka, bocorka, iyo hilibka lo'da. Shaybaar ahaan, waxaa loo heli karaa sida budada budada nicotinamide mononucleotide.
Marka la eego qaabkeeda cayriin, waxaa lagu tilmaamayaa lambarka CAS, 1094-61-7. Xaruntu waxay ka timaaddaa falcelinta ka dhexeysa nukleoside, sida nicotinamide riboside iyo koox fosfate ah.
Daraasado horudhac ah, Nicotinamide Mononucleotide oo ka shaqeeya jiirka ayaa cadeeyay inuu yahay mid waxtar u leh nashaadaadka unugyada jirka, maareynta cudurka Alzheimer, sonkorowga da'da la xiriira, dhibaatooyinka ka dhasha cayilka, iyo daaweynta wadnaha. In kasta oo ay yihiin waxqabadyadaan dawooyinka la xiriira ee la xidhiidha Nicotinamide Mononucleotide, haddana helitaanka ugu badan ee dhulgariirku waa ka qayb qaadashada hawlaha kahortagga gabowga.
Jirka bani'aadamka, NMN waa ilaha ugu muhiimsan ee tamarta gudaha unugyada. Marka aad da 'jirtid, tamarta gacanta ayaa hoos u dheceysa heerarka hoose ee nicotinamide mononucleotide iyo hoos u dhaca NAD +. Maaraynta NMN waxay ka beddeli doontaa geeddi-socodka oo ay magdhow u tahay miisaanka.
(1) Sidee NMN qarsoodi ah?
Daawooyinkaan gabowga waxay u safraan sida hillaaca ka soo baxa mindhicirka una wareega wareegga dhiigga. Dhowr daqiiqo gudahood, waxaa loo qaadi doonaa socodka dhiigga. Sababtaas awgeed, waxaa caddaanaysa inaysan jiri doonin wax fal-gallo kiimikaad oo ka dhacaya dariiqa molikuyuullada.
Xawaaraha la yaabka leh ayaa ka dhigay cilmi-baarayaasha inay soo gabagabeeyaan suurtagalnimada gaadiid, kaas oo sahlaya keenista shidaalka unugyada. Tusaale ahaan, Imai iyo asxaabtiisu waxay u dhaqaaqeen sidii ay jawaab uga heli lahaayeen daraasaddiisii ​​ugu dambaysay ee la daabacay Janaayo 7, 2019.
Da 'gabow, jirku wuxuu isticmaalaa NAD + ka badan inta uu soo saari karo. Si kastaba ha noqotee inta badan ee aad isticmaashid nicotinamide mononucleotide, hawshu wali waxay ahaan doontaa waqti lumis illaa iyo inta aysan jirin mekrokule ka caawiya safarkiisa. Ku sii wad inaad rogrogto si aad u kala furto xamuulka dahsoon ee xallin doona 90% dhibaatooyinka gabowga.
(2) Nicotinamide Mononucleotide Habdhiska qaabdhismeedka
magaca Product Root Nicotinamide Mononucleotide (NMN) budada
CAS maya. 1094-61-7
Caanaha ambalaaska C11H15N2O8P
miisaanka kelli 334.221 g / mol
milmi Qodobka biyaha
heerkulka kaydinta -20 ° C
magacyada kale · Nicotinamide-1-ium-1-β-D-ribofuranoside 5'-fosfate
· Nicotinamide ribonucleoside 5'-fosfate
Nikotinamide Mononucleotide iyo NAD +
Labada Nikotinamide Mononucleotide iyo NAD + waa biomarkers muhiim u ah keenida shidaalka gacanta.
NMN waa dhexdhexaad u ah biosynthesis of Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +). Maaddadu waxay u dhaqantaa sida substrate for enzymes gaar ah sida nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase, taas oo beddelaya NAD + ee jirka aadanaha. Marka la gooyo, agagaarkan ayaa isbedelaya nicotinamide. Dabadeed, waxay ku dhacdaa falgal kale oo dheellitiran oo ku lug leh nicotinamide fosforibosyltransferase (NAMPT) kaas oo abuuraya NMN.
Labadan meco ayaa isku xiran sida maqnaanshaha midkoodna uu saameyn doono kuwa kale. Qaado, tusaale ahaan, marka heerarka NMN hoos u dhacaan, laga yaabo in ay sabab u tahay xasilloonida, tirada NAD + ka dib ayaa hoos u dhigi doonta.
Markaad da 'jirtid, hawlaha qaar ayaa waxay u egtahay in ay isticmaalaan NAD + in ka badan jirka oo keeni kara shidaal. Sirtuins, NADase, iyo polyp-ADP-polymerasease (PARP) waa qayb ka mid ah enzymes, kaas oo gubaya NAD + taasoo keentay cillad-celinteeda.
Si kastaba ha noqotee, hoos u dhaca shidaalka gacanta ma ahan mid aan rasmi ahayn. Qaado, tusaale ahaan, dareenka enzymatic ee ku lug leh caawinta PARP ee dayactirka DNA-ga waxyeeloobay. Sidoo kale, sirtuins waxay door muhiim ah ka ciyaaraan hagaajinta dheef-shiid kiimikaadka.
In kasta oo uu jiro xiriir dawooyin oo u dhexeeya labadan biomarkers, weligaa si toos ah uma maamuli kartid NAD + nidaamka. Inta ugu badan ee habka suurtagal ah, dhibaatooyinka soo raaca waxay noqon doonaan kuwo aan la cabi karin. Tusaale ahaan, qadar sare waxaa lagu gartaa daal, walaac, iyo hurdo la’aan. Waxaa intaa dheer, xarunta ayaa lagu yar marin karaa xuubka plasma.
The antiotinamide Mononucleotide waxaa loo heli karaa daroogo afka ah. Niyadjabinta iyada oo la marayo derbiga xasaasiyadda iyo habka wareegga wareegga waxay ku bilaabataa qiyaastii seddex daqiiqo. By 15th min, dhammaantood waa la qaadi doonaa. Daraasad dhammaystiran oo ay sameeyeen Imai iyo la-hawlgalayaashiisa cilmi-baadhista ah waxay xaqiijinayaan inay jiraan borotiin dardargelisa sicir-bararkan degdegga ah.
Marka la iskudhafo unugyada, NMN waxay si sahlan u beddeleysaa NAD + kaydinta sahlan. Nidaamka dheef-shiid kiimikaadka wuxuu qaadan karaa ilaa nus saac. Xaddiga NAD + wuxuu ku badan yahay muruqyada qalfoofka, unugyo cad oo adipose, beerka, iyo kortelka. Si kastaba ha ahaatee, maamulka wakhtiga dheer ee Nicotinamide Mononucleotide ayaa kor u qaaday heerka NAD + ee xubnaha kale ee la mid ah unugyada adipose caleemaha.
(2) NMN Pathos Biosynthetic Paths
Waxaa ku jira unugyada mammalian, waxaa jira ilaa saddex dariiq oo metabolis kala duwan si loo siiyo NAD + yaraanta.
De Novo waa erey adag, oo micnaheedu yahay "laga bilaabo bilawga". Halkan, nucleotides waxay ka soo baxaan tryptophan ama nicotinic acid, taas oo ugu weyn ka timid cuntada NMN-hodanka ah.
Waddadan, taxanaha ficil-ka-soo-saarka biochemical waxay keenaysaa samaynta nicotinic acid mononucleotide, adenine dinicleotide nicotinic acid, iyo ugu dambeyntii NAD + la filayo. De Novo waxay soo saartaa 15% wadarta guud ee shidaalka.
② Waddada Salvage
Halkan, wadada waxay soo celineysaa nucleosides kiisaska DNA-ga jabo. Waxay ka badan tahay 80% wadarta NAD +, kaas oo jidhka bani'aadamku u baahan yahay shaqooyinka gacanta. Wadada waxay ku celisaa labadaba nicotinic acid iyo nicotinamide si ay u keenaan NAD + cusub.
Nicotinate phosphoribosyltransferase waxay xoojisaa sameynta monicakinotide nicotinic acid nicotinic acid. Ka dibna, nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 1 wuxuu xoqdaa adenylation ee wax soo saarka nicotinic acid adenine mononucleotide, ugu danbeynna NAD +.
NMN shaqada bini'aadamka waxay kuxirantahay wadadan.
③ NR Dib u noqoshada
Nicotinamide Riboside waa NAD + soo-hor-imaad kale. Marka loo eego fosforyaalka iyadoo ay joogaan nicotinamide riboside kinase, biomarker wuxuu dhaliyaa NMN ka hor intaadan u gudbin isbedel kale oo enzymatic NAD +.
Taariikhda NAD + iyo NMN ee cilmi-baarista
Sannado badan, daraasadda iyo isticmaalka daaweynta nicotinamide adenine dinucleotide iyo horjoogayaasheeda ayaa dhammaantood ahaa caro. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad ogaataa in kuwaani dheeraadka ah anti-gabowga ayaa si ballaaran loo qabtay cilmi baaris taniyo badhtamaha 1900s.
In 1906, aqoonyahannadii ugu horreeyay waxay sheegeen in NAD + ay dedejiyeen heerka hargabka ee khamiirka. Ka dibna, biochemist kale ayaa raacay habka loo kala soocayo sidii nukleotide.
Iyada oo cilmi-baaris ku sameysay 1937, Conrad Elvehjem ayaa ogaaday in nicotinamide iyo nicotinic ay yihiin fitamiino iyo walxaha NAD +. Later, wuxuu ogaaday in labadani ay yareeyn karaan pellagra eyda. Sababta ayaa ah in heerarka nicotinic acid iyo nicotinamide ay ka hooseeyaan kuwa shuban cudurada.
Sannadkii 1963, koox saynisyahanno ah ayaa aasaasay in Nicotinamide Mononucleotide ay ka shaqeyso jiirka ayaa kicin doona enzymes-ku tiirsan DNA, kuwaas oo muhiim u ahaa kor u qaadista howlaha gacanta. Laba sano ka dib, cilmi baarayaashu waxay iftiimiyeen waddooyinka NAD + biochemical ee ku lugta leh tryptophan iyo nicotinic acid.
Tan iyo markaas, biochemists waxay ku hayaan muujinta xiisaha NMN iyo cilmi baarista NAD +. Xilligan, diiradda muhiimka ahi waxay saarantahay muhiimadda ay leedahay mukhaadaraadka da 'yarta ah muddada dheer iyo yareynta dhibaatooyinka la xiriira da'da.
Baaritaanka ugu dambeeyay ee Nicotinamide Mononucleotide Ka shaqeeya jiirka
Waxaa jira daraasado aan horay loo soo qaadan oo ku saabsan mood-gooyooyinka kuwaas oo ka soo baxa faa'iidooyinka daaweynta ee Nicotinamide Mononucleotide (1094-61-7).
Aynu xoogga saarno dhowr qof, kuwaas oo ku yeeshay saameyn kacsan oo ku saabsan biochemistry.
(1) Sida laga soo xigtay Sinclair, NAD + waa ilbaxnimada dhallinyarada
Dr. Sinclair iyo asxaabtiisuba waxay daabaceen dhawr baaritaan oo ku saabsan suurtogalnimada nicotinamide mononucleotide iyo NAD + dib u celinta gabowga. Sida laga soo xigtay daraasaddiisa 2013, Sinclair iyo kooxda ayaa ogaaday in jiirarkii hore ee 22 ee qaadanayay NMN muddo lix cisho ah uu muujiyey hagaajin ku saabsan awoodda muruqyada, dheef-shiid kiimikaad, iyo dulqaad.
Kadibna wargayska cilmi baarista ee 2016, kooxdu waxay xaqiijisay in NMN uu lahaa faa'iidooyin isku mid ah jimicsi. Halkii aad ku socon lahayd treadmill maalin kasta, weli waad la kulmi kartaa saamayn isku mid ah markaad isticmaashid Nicotinamide Mononucleotide supplements.
Sida laga soo xigtay Harvard Geneticist, NMN waxay ka shaqeysaa aadanaha waxay ku xiran tahay hareeraha socodka dhiigga ee ciyaartoyda waayeelka ah iyo kuwa ciyaaraha fudud.
(2) Mills waxay yididaa in NMN hoos u dhigto fayaqaanka jiritaanka jinsiga
Marka loo eego daraasadda 2016, Mills et al. waxay ogaadeen in daaweynta NMN ay ka hortagi doonto hoos u dhaca dhaqdhaqaaqa jireed iyo immunoji ahaan jiirarka hore. Dhamaadka dhammaystirka NMN cilmi baaris, jiirka ayaa diiwaangaliyay kororka muujinta unugyada difaaca jirka, faafitaanka lymphocytic, iyo yareynta qoyaanka jirka.
Markii hore, 2011, Mills, Yoshino, iyo Imai waxay isticmaaleen moodello jiir ah si loo xaqiijiyo doorka NAD + ee daaweynta cudurka macaan ee cunnada ku dhaca iyo da'da la xiriirta. Wali daraasad kale oo 2016 ah, wuxuu gacmaha la galay cilmi baarayaal kale oo aasaasey in kaabista NMN ay ka hortageyso cadaadiska oksidheerka iyo cilladda xididdada jiirka.
(3) NMN waxay isku-dardarisaa Cudurka Alzheimers (AD) ee Muuqaalka Murqaha
Sannadkii 2015, Long et al. baaray saameynta NMN ee dhimista neefsashada mitochondrial maskaxda ee jiirarka qaba cudurka Alzheimers. Kooxdu waxay xustay in daaweynta NMN ay awood u yeelatay in lagu daaweeyo etiology ee AD, oo ay ku jiraan OCR hooseeya (heerarka isticmaalka oksijiinta), NAD + falloff, iyo cilladaha mitokondria.
Sannadkii 2016, Wang iyo saaxiibbadiis ayaa daabacay cilmi-baaristooda, iyagoo ku soo gabagabeeyay kuwan anti-gabowga daroogadu waxay la dagaallamaan garashada iyo cillad la'aanta neerfaha, taasoo ka dhalata oligomer y-amyloid (Aβ). Borotiinkan Aβ waa neurotoxic wuxuuna mas'uul ka yahay sameynta huurada maskaxda ee bukaanka AD. Wang et al. waxay ku soo gabagabeeyeen in maamulka NMN ee jiirarka uu horseeday hoos udhaca Aβ oligomers, taas oo kor uqaadeysa howlaha garashada
Daraasad 2017 ka dib, Hou iyo asxaabtiisa waxay ogaadeen in kaabista NAD + ay hoos u dhigtay wax soo saarka lig-amyloid oligomers. Sannad ka dib, Yao iyo kooxdiisu waxay aasaaseen in Nicotinamide Mononucleotide ay yareyneyso isku ururinta A of iyo lumitaanka synaptic ee moodooyinka AD-Tg murine.
(4) NMN iyo Ka-ilaalinta Cardio
Sida ku cad daabacaadii 2014 ee Yamamoto iyo asxaabtiis, NMN wuxuu ka ilaaliyaa wadnaha dhaawaca ischemic iyo dib u soo noqoshada. Daraasaddan ka hor, Yamamoto wuxuu ka mid ahaa koox 2012, oo ogaatay in NAD + ay ka hortageyso cayilka cunnada ku keena jiirka.
2016, De Picciotto et al. iyo saaxiibadiis biochemists waxay daraasad ku sameeyeen saameynta kaabista NMN ee ku saabsan shaqeynta xididdada jiirka da'da ah. Marka laga eego, nicotinamide mononucleotide wuxuu cadeeyay inuu wax ku ool u yahay dib u celinta cillad xididada dhiigga, diiqadda oksida, iyo hoos u dhaca elastin.
(5) Discovery on Route Cusub ee Nidaamka Shidaalka ee Shin-Ichiro Imai
Daraasadihii ugu dambeeyay, koox cilmi-baare ah oo ay hoggaaminayeen Imai ayaa soo ogaaday isla markaana xayiray naqshadeeyaha qarsoodiga ah ee NMN ee unugyada.
Cilmi-baaristan dheeraadka ah ee NMN ayaa markii ugu horraysay laga heley Janaayo 2019 Metabolism Nature Nature. Imai waxay sameysey in borotiin gaar ah, Slc12a8, uu mas'uul ka yahay isbedelka degdegga ah ee NMN ee NAD + iyo u qaadista unugyada. Enzymekani wuxuu ku badan yahay dadka waayeelka ah halkii ay ka dhalin lahaayeen dhalinyaro ama caafimaad leh.
Dhammaan daraasadaha horudhaca ah, saynisyahannada cilmi-baaristu waxay ku milmi doonaan cabbiraadaha la og yahay ee budada badan ee nikotiinamide mononucleotide ka hor intaan iyaga la siin jiirka.
Faa'iidooyinka ka yimaada Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
NMN waxay leedahay hawlo badan oo daaweyn ah iyo saameyn ku yeelashada daaweynta jirka ee bini'aadamka. In ka yar toban sano, saynisyahanno ayaa waqtigooda u huray si ay u bartaan dhammaan faa'idooyinka Nicotinamide Mononucleotide oo ay ku jiraan hababka lagu sharxi karo gabowga iyo xanuunka da'da ku xiran.
Aynu dhex galno faa'iidooyinka dhismaha ee nidaamka aadanaha.
(1) Xoojinta Qalabka Naafada
Ilaa bilawga 21st qarnigii, aqoonyahanno waxay lahaayeen sababo ku filan oo lagu sheegi karo gabowga inay noqdaan geedi socod aan laga noqon karin. Si kastaba ha noqotee, fikradan ayaa noqotey mid aan waxba galabsan sababtoo ah iyada oo laga faa'iideysanayo helitaanka ciriiriga dheeraadka ah anti-gabowga sida Nicotinamide Mononucleotide.
NMN waa wax dabiici ah oo ku dhaca unugyada aadanaha waxayna mas'uul ka yihiin biosynthesis of NAD + iyo soosaarka tamarta. Markaad gabowdid, labadan qaybood waxay kala gedisan yihiin inay keenaan unugyada maskaxda. Xasuusnow, unugyada shaqadani waxay u baahan yihiin shidaal ku filan oo si joogto ah loola socodsiiyo, sidaa daraadeed, dhacdadu waxay gaabin doontaa hab nololeedka gacanta.
Maareynta daroogooyinka ka hortagga gabowga sida NMN ayaa ka noqon doona habka dib u dhigida habka da'da ah.
(2) Qaadashada Heerarka Tamarta ee Gaadiidka Dhalinyarada
Asalka aasaasiga ah ee dhibcaha cudurka ee la xiriira da 'da' ayaa hoos udhaca heerkulka. Hoos-u-dhaca soo saaridda tamarta gudaha unugyada ayaa ah waxa ugu weyn ee keena calaamadaha da'da.
Ahaanshaha hor-u-marinta NAD +, NMN waxay leedahay door ka ciyaarida ilaalinta heerarka tamarta ugu fiican ee mitokondria. Aging waxay si toos ah u keeni doontaa hoos u dhac ku yimaada diiradda NAD +. Natiijada, habka gabowga ayaa si dhaqso ah u qaadata kor u qaadista cudurrada da'da weyn.
Dhibicda heerarka tamarta gacanta ee ku jira xubnaha muhiimka ah sida murqaha, xididdada dhiigga, kalyaha, beerka, ama beeryaradu waxay mar walba farageliyaan caafimaadka jirka iyo garashada. Sababtan awgeed cudurada sida ischemia, xaaladaha wadnaha, kalyaha oo aan shaqayn, cudurada neurodegenerative, iyo kuwa kaleba.
Xalka ugu fiican waa iyada oo lagu kabo jirka Nicotinamide mononucleotide iyo NAD + oo leh daaweynta NMN ee dibedda ah. Kuwani daawooyinka gabowga waxay siinayaan heshiis cusub oo nolol unugyada gabowga ah, taas oo markaa gelin doonta muuqaal dhalinyaro ah.
(3) Hagaajinta wareegga dhiigga
Mid ka mid ah isbeddellada ku dhaca xilliga hore waa hoos u dhaca tayada marinnada dhiigga ee ku jira jirka mammurka. Sidaa daraadeed, habka wareegga wareegga ah waxaa ku jira culeysyo badan marka ay qaadayaan nafaqooyinka, ogsijiin, kuleyl, ama qashin ka qaadida xubnaha. Maadaama ay xaaladdu tahay mid joogto ah, waxay sii xumaataa waqtigii loo horseeday jiritaanka cudurada muddo dheer taagan.
Nikotinamide Mononucleotide ayaa si aan toos ahayn mas'uul uga ah soo saarida maraakiibta dhiigga. Ii ogolow inaan sharaxo. Maaddadu waxay soo saartaa NAD +, taasoo markaa kicinaysa sirtuin deacetylase (SIRT1) protein.
Taa beddelkeeda, SIRT1 waxay kaamilaysaa haraaga lizin ee ka caawiya soo saaridda xakamaynta lacag la'aanta ah ee oksijiinta. Farsamadani waxay ka hortageysaa cadaadiska oogada, reperfusion, ama dhaawacyada ischaemic. Kiisaska caadiga ah, jidhka laftiisa ayaa si joogto ah iskaga hortagi kara ischemia iyo xaaladaha la xiriira iyada oo loo marayo horukaca iskudhafista (IPC). IPC ayaa markaa ka dib ku dhaqaaqi doonta kicinta wax soo saarka SIRT1.
Waxaad maamuli kartaa NMN ka hor munaasabada iskudhufka dhacda ama marka ay muuqato. Ka hor inta aan la gaarin, xeradu waxay bixisaa kaar ilaalin adoo kor u qaadaya wax soo saarka ATP iyada oo loo marayo glycolysis.
Marka laga hadlayo Ischemia, wali waad isticmaali kartaa Nicotinamide Mononucleotide maadaama ay kicinayso asiidh isla markaana keeni karto mitochondrial impermeability; markaa, dammaanad qaadka ilaalinta nidaamka wadnaha.
(4) Musqusha Dareeraha
Maxaad filanaysaa marka socodka dhiiggu hoos u dhaco? Hagaag, gobolku wuxuu u horseedi doonaa luminta muruqyada. Shaki kuma jiro inaad ogaan doonto dadka waayeelka ah inay leeyihiin waxqabad yar, dulqaad hoose, dhaqdhaqaaq la'aan, iyo aad u daal badan markasta.
Mid ka mid ah daahfurka dhulka ee Dr. Sinclair wuxuu udub dhexaad u ahaa waxtarka NMN ee xoojinta muruqyada. Sida laga soo xigtay 2013 iyo daraasadihii ugu dambeeyay ee 2018, jiirkii hore ee soo gaadhay daaweynta NMN ee toddobada maalmood ah waxay noqdeen kuwo jir ahaan u firfircoon oo firfircoon sida dhiggooda da'da yar.
Awoodda muruqyada iyo adkaysiga jiirarka ugu da'da weyn (30-bilo jir) waxay la mid ahaayeen kuwa da'yar shan bilood jir ah. Da'dahani waxay la mid yihiin qiyaastii 70 iyo 20 sanadka oo dhan. Laga soo bilaabo natiijooyinka, waad fahmi kartaa in NMN ka shaqeyso aadanaha waa hubaal dhimasho.
(5) La Dagaalanka Xanuunada Nuuryeelka
Maskaxdu way ka badan tahay sida awoodda nidaamkaaga. Aragtidani waxay noqon kartaa sababta sababta ay daaweeyntu marwalba ugu tiirsanaanayso hawlaha maskaxda marka lagu dhawaaqo waqtiga dhimashada.
Yareynta heerarka NAD + ee maskaxda ayaa saameyn ku leh caafimaadka garashada ee waayeelka. Maamulka NMN waxay dedejisaa wax soo saarka NAD +, taas oo ah, ilaalinta hawlaha neerfaha.
Dhibcaha daraasadaha ayaa caddeeyay in Nicotinamide Mononucleotide waxtarrada garashada, istaroogga, iyo caqabad ku noqoshada xusuusta, taas oo ku badan da 'weyn. Soo koobid, tan anti-gabowga dheeri ah ayaa mas'uul ka ah dayactirka neerfaha.
NMN waxay inta badan bartilmaameedsataa cilmiga etiology ee xaalad kasta oo neerfaha la siiyaa. Tusaale ahaan, Alzheimer's cudurku wuxuu dhacaa sababtoo ah hoos u dhaca NAD +, heerka hoose ee isticmaalka oksijiinta ee maskaxda, iyo cilladaha mitochondrial. Kordhinta qadarka NMN ee jirka ayaa tiriya dhammaan saameyntan.
Sida laga soo xigtay daraasad la daabacay 2012, Nicotinamide Mononucleotide waxay si wax ku ool ah u maareyn doontaa dhaawaca gudaha, taas oo inta badan keenta istaroog. Jiirkii hore ee ku hoosjiray qiyaasta NMN waxay diiwaangeliyeen horumar weyn oo ku yimid soosaarka gudaha NAD +. Moodooyinkaan cilmi baarista ah waxay lahaayeen difaaca ugu badan ee ka hortagga istaroogga jirka, dhimashada neerfaha, iyo bararka neerfaha.
(6) Dheef-shiid kiimikaad ah ee Hore ee Da'da Da'da
Qaar badan oo cilmi-baarayaal ah ayaa daraasad ku sameeyay oo xaqiijiyay in NMN ay fududeyneyso gulukooska guluukoosta iyada oo kor u qaadaysa dheef-shiid kiimikaad ku jirta jiirka jahawareerka leh cunto xumo. Daraasadani waxay sidoo kale adeegsatay bini-aadanka da'da yar ee sonkorowga qaba ama sonkorta sare ama nafaqada liidata. Intaa waxaa dheer, cunto badan oo dufanku ku badan yahay baruurta waxay keenaysaa caabuq insulin.
Nikotinamide Mononucleotide waxay ku haysaa soosaarka ugu sarreeya NAD +, taas oo markaa hoos u dhigta bararka da'da ku xiran iyadoo la hagaajinaayo firfircoonaanta insulin ee xubnaha fatu.
(7) Daaweynta Sonkorowga
Dadka qaba sonkorowga nooca II waxay had iyo jeer muujiyaan iska caabin insulin. Sifadaani waxay ugu wacan tahay hoos u dhac ku yimid NAD +. Natiijo ahaan, unugyada waxaa ku dhaca cadaadis iyo oksijiin. Haddii aad weli da 'yar tahay, jidhku wuxuu isku cusbooneysiinayaa iyada oo loo marayo waxqabadyo jireed qaarkood. Si kastaba ha noqotee, da'da, heerarka NAD + ayaa hoos u dhacaya xubnaha nolosha taageeraya sida murqaha lafaha, beerka, maskaxda, iyo xammeetida.
Cunsurka kale ee wax ku biiriya sonkorowga la xiriira da'da waa cunno dufan badan. Xaddiga aan caadiga ahayn ee dufanka buuxa ayaa joojiya biosynthesis-ka NAD +. Si loo caddeeyo waxtarka Nicotinamide Mononucleotide ee daweynta da'da iyo sonkorowga cuntada ku dhaca, Yoshino iyo asxaabtiisuba waxay isticmaaleen laba nooc oo jiir ah.
Ka dib markii la siiyay qiyaasta maalinlaha ah ee NMN ku dhowaad 10 maalmood, aqoonyahannadu waxay caddeeyeen in jiirarka, ee lagu soo rogay cuntooyinka dufanka badan, ay diiwaangeliyeen dulqaad la'aanta insulin. Dhinaca kale, jiirka sonkorowga ayaa muujiyey horumar weyn oo ku saabsan cudurka 'hyperlipidemia'.
(8) Dib-u-noqoshada da'da
Dhibaatooyinka joogtada ah ee caafimaadku waxay had iyo jeer raacaan habka gabowga. Marka jirku is-bedelo dhowr isbeddeleed jireed, qaar ka mid ah hawlaha taleefanka ayaa dhacaya si ay dib ugu dhacaan. Qaado, tusaale ahaan, heerarka nicotinamide ee adenine dinucleotide hoos u dhac ku yimaada xubnaha badan, taasoo keenta hoos u dhaca wax soo saarka tamarta by mitochondrion.
Aging waxay u baahan tahay dhaqdhaqaaqyo kala duwan sida waxyeelaynta DNA-ga sababtoo ah molecules aan la jarjarin, cadaadiska dhiigga ee maskaxda, iyo jirrooyinka kale ee garashada. Ma ogtahay waxa dhacaya? Hagaag, waxaa jira borotiin dayactir DNA ah (PARP1) ee nidaamka aadanaha. Marka ay dhacdo dhaawac DNA ah, NAD + waxay kicineysaa borotiinkan si loo hagaajiyo unugyada saameeya.
Daraasado dhowr ah ayaa la yimid nicotinamide mononucleotide gabow. Tusaale ahaan, Mills iyo asxaabtiisuba waxay isticmaaleen moodello jiir ah si ay u baaraan saameynta jirdhiska jir-dhiska ee da'da-NMN.
Daraasaddan, cilmi-baarayaashu waxay xuseen in muddada dheer ee daweyntu ay keentay kor u qaadista hidaha gogosha leh ee ku jirta beerka, muruqyada muruqyada, iyo unugyada qandhada. Maxaa badanaa, natiijooyinka waxay xaqiijiyeen in kor u kaca sifooyinka unugyada jirka, korodhka lymphocytes, iyo dhaqdhaqaaqa leukocytes.
Dabeecadda kale ee gabowga waa joogitaanka dhibco iftiin leh oo ku jira sanduuqa indhaha. Xaaladdan oo ay weheliso lafo-beelka laf-dhabarka iyo awood-la'aanta in la soo saaro ilmo-yaryar ayaa si fiican looga baaray jiirka. Cilmi-baadhayaashu waxay arkeen in jiirarka, oo lagu soo rogay daweyn 12-bishii NMN, dhammaan xaaladaha kor ku xusan.
Longevity waa sababta kaliya ee dadka iibso Nicotinamide Mononucleotide.
(9) Daaweynta Cayilka
Dadka waayeelka ah, NMN waxay hoos u dhigi karaan 10% miisaankii ugu horreeyey ee jirka iyada oo aan helin dhexda dhexe ee u dhaxaysa cunto xumo iyo korriin. Mabaadiida wadnaha ee cayilka iyo sonkorowga ayaa isku xiran. Heerka NAD + heerarka hooseeya waxa uu keenaa dhibaatada maskaxdoonka; Sidaa awgeed, hoos u dhac ku yimaada soosaarka ATP.
Cayilka ayaa miisaamaya suurtagalka mitokondria ee abuuraya tamarta ATP ee unugyada. Markaad maamulayso Nikotinamide Mononucleotide, daroogadu waxay hagaajin doontaa gulukooska gulukoosta iyo hawlaha kale ee dheef-shiid kiimikaadka ee la xidhiidha cayilka.
Markay tahay hagaajinta socodka dhiigga, NMN ee daaweynta cayilku waxay u dhaqmeysaa si la mid ah jimicsiga. Hal kiniin ah ayaa u fiicnaan lahaa sida isticmaalka treadmill-ka maalin kasta. Si kastaba ha noqotee, farqiga ayaa ku yimaada heerarka NAD + ee ku jira xubnaha jirka. Halka Nicotinamide Mononucleotide uu kordhiyo NAD + labadaba beerka iyo unugyada muruqyada, jimicsiga wuxuu kaliya ku dhisaa xarunta muruqyada dhexdooda.
Miyay Nikotinamide Mononucleotide (NMN) dhab ahaantii ka shaqeyneysaa aadanaha?
Waa hagaag, tani waxay noqon kartaa su'aasha hadda ka dhaceysa madaxaaga. Si kastaba xaalku ha ahaadee, dhammaan cilmi-baarista iyo daraasadaha Preclinical ee ku saleysan Nicotinamide mononucleotide iyo NAD + ayaa lagu bartilmaameedsanayay moodooyinka murine.
Haddii aad haysatid qadarin ku saabsan wax ku oolnimada shaqooyinka NMN ee aadanaha, halkan waxaad u baahan tahay inaad ogaatid. Dr. David Sinclair, oo ah cilmi-baare sare, iyo hiddaha hidaha ee Jaamacadda Harvard waa mid ka mid ah dadka qaata NMN.
Sinclair wuxuu qirayaa inuu qaato kaabista. Illaa iyo hadda, aqoonyahanku ma duubin waxyeellooyin nicotinamide mononucleotide. Taas bedelkeeda, wuxuu qirayaa inuu dareemayo da 'yar maskax maskax leh. Hangover iyo jet jet ayaa hadda isaga xiisad ka soo maray. Wuxuu sii adkeeyay in aabihiis, oo ku jira dabayaaqadii todobaatameeyadii, sidoo kale uu qaato kaabista.
Intaa waxaa dheer, Dr. Sinclair ayaa daweynta u adeegsaday maxkamad hor leh oo ka dhacday Brigham iyo Isbitaalka Haweenka. Waxa uu leeyahay qorshe dheeraad ah in la baaro dheellitirka dadka waawayn ee waayeelka ah. Inkasta oo uu marayo wajiga koowaad mid dhamaystiran, haddana weli ma daabicin daabacaad rasmi ah. Sinclair waxay bilowday marxaladda labaad ee bukaan-socodka Kaalmada NMN cilmi in 2018.
Daraasad caafimaad oo ku habboon 1st Juun 2020, cilmi baarayaashu waxay raadinayaan inay sameeyaan isbeddel ku yimaada dareenka iyo beta-unugyada unugyada NMN ee bini'aadamka. Culimada waxay ka soo jeedaan Jaamacadda Washington University School of Medicine iyo Jaamacadda Keio ee Daawada ee Tokyo.
Dumar bani-aadmi ah oo ka bilowday 2016 oo ku yaala Jaamacadda Keio, culimadu waxay raadinayaan inay qiimeeyaan ammaanka NMN ee dadka waaweyn ee caafimaadka qaba. Marxaladda labaad ee socota, machad isku mid ah, oo uu hogaamiyo Shin-Ichiro, ayaa baaraya maamulka muddada dheer NMN. Maxaa kale, kooxdu waxay raadineysaa inay qiimeeyso xuduudaha dheef-shiid kiimikaad-dheef-shiid kiimikaadka, NMN kinetics, iyo saameynta maandooriyaha ee saamiga dheef-shiid kiimikaadka.
Daraasadda bukaan socodka 2017 ee Jaamacadda Washington, ka qaybgalayaashu waxay ka mid ahaayeen haweenka 50 ee da'doodu tahay 55 ilaa sanadka 75. Kooxdu waxaa la dhigay qiyaasta maalinlaha ah ee 250mg ee NMN mudo sideed todobaad ah. In kasta oo ay ahaayeen kuwo caafimaad qaba, dumarkan ayaa yaraaday heerarka sare ee gulukooska dhiigga, triglyceride, iyo BMI. Daraasaddu weli wali ma dhammaato.
Waqtigaan la joogo, ma jiraan daabacado cadeynaya shaqada NMN ee aadanaha. Si kastaba ha noqotee, waa inaad ku dhegtaa sababtoo ah wax ayaa karinaya oo tijaabooyinka caafimaad ayaa laga yaabaa inay rajo galaan.
Sida loo Isticmaalo Nicotinamide Mononucleotide (NMN)?
Haddii aad raadineyso inaad iibsato nicotinamide mononucleotide, waxa jira waxyaabo aad u baahan tahay inaad ogaato.
Waxaad daaweyn ahaan u qaadan kartaa kaalmada cuntada tan iyo markii aysan weli helin ansaxinta FDA ee ugu dambeysa si loo noqdo daroogo dhakhtar qoro.
Qiyaasta waxay u dhaxeysaa 25mg iyo 300mg iyada oo ku xidhan faa'iidooyinka caafimaad ee aad rabto inaad ku guuleysato. Si kastaba ha noqotee, dadka qaar ayaa qirta in ay qaataan 1000mg maalin kasta. Tusaale ahaan, Dr. Sinclair wuxuu qaadanayaa 750mg / maalin. Ka sokow, wuxuu ku-darsamayaa nidaamkan dib-u-helidda iyo metformin.
Imtixaanada NMN ee kiliinikada, cilmi-baarayaasha intooda badani waxay mawduucooda ku dhajin karaan qiyaasta xNUMXmg ilaa 100mg.
Af iyo Sublingual
Haddii aad rabto in aad sare u qaaddo bioavailability of this supplement, waa inaad ka iibsataa kiniinada Nicotinamide Mononucleotide ee maamulka kumbuyuutarka. Qaadashada daawada si qumman ayaa yareysa qadarka nuugista. Sababta ayaa ah in uu ku dhaco dheef-shiid kiimikaad iyo hoos-u-dhac marka uu ka gudbo marinka dheef-shiidka iyo beerka.
Nabadgelyada NMN toos ah ayaa si toos ah u galeysa dhiigga iyada oo aan wax faahfaahin ah lahayn. Qiyaasta nuugista ee habkan bixinta waa qiyaastii shan jeer in ka badan maamulka afka. Xaaladdan oo kale, waa inaad kordhisaa qiyaasta si aad u sameysid sheyga ugu horeeya ee ku dhaca beerka. Adiga oo ku shaqeynayay cilmi baaris, waxaad u baahan kartaa nicotinamide mononucleotide budada bakeeriga si aad u buuxiso daraasadda.
Saameyntii Neefta ee Nicotinamide Mononucleotide Waa inaad ogaataa
Caadi ahaan waxay la mid yihiin kuwa ay soo bandhigtay niacinamide iyo fitamiin B3 kale oo ka timaadda waxyeeloyinka suntan. Si kastaba ha noqotee, dadka badankood xitaa ma la kulmaan iyaga. Tusaale ahaan, saynisyahanka sare ee cilmi-baarista ee Jaamacadda Harvard ayaa qirtay qaadashada NMN, laakiin ma uusan dareemin wax saameyn ah oo garaacid ah.
Ilaa hadda, dhammaan naqshadaynta Nicotinamide Mononucleotide waxay ku shaqaysaa jiirarka, ma jirto xog ay muujinayso jiritaanka saameynaha daawooyinka murqaha leh. Ma jiro cilmi-baarayaal calaamado taban u muujiyay maamulka gaaban iyo kuwa muddada dheer NMN.
Dadka qaarkiis ayaa laga yaabaa in ay ilaaliyaan hoosta diidmooyinka soo socda;
Dareen-celinta xasaasiyadeed sida xasaasiyad, cuncun, ama finan
Xaalado dhif ah, saameynaha nicotinamide mononucleotide wuxuu noqon karaa mid daran ilaa xad aad u baahantahay baaritaan caafimaad oo degdeg ah. Si aad u sheegto dhowr, dhibaatooyin neefsasho, wadna garaac aan joogto ahayn, matag joogto ah, maqaarka oo hurdi ah, iyo cunto xumo ayaa ka mid ah calaamadaha daran.
Ilaa hada, tijaabooyinka kiliinikada waxaa kaliya loogu talagalay dadka waaweyn ee caafimaadka qaba da'da da'da ee 45 sanado 75. Sababtan awgeed, kooxahan soo socda waa inay taxaddaraan ka hor intaan la maamulin NMN dheeri-tirinta gabowga.
Hooyooyinka uurka leh iyo kuwa nuujinaya
Shakhsiyaadka qaba taariikhda niyad jabka NMN
Bukaanka qaata daawooyinka cudurrada joogtada ah
Halkee ayaan ka heli karaa Maandooriyaha Ka-hortagga Argagixisada-Nikotinamide Mononucleotide (NMN)?
(1) Ilaha Cuntada ee NMN
Waxaad u maleyneysaa inaad foosha ku hayso sababta aad u iibsato Nicotinamide Mononucleotide marka aad si fudud u heli karto cuntooyinka qaarkood. Aan si kooban u sharaxo sababta ay u-baahan tahay taakuleyntan.
Maadaama NAD + uu hoos u dhaco jirka, sababtuna tahay da'da, unugyada ma awoodi doonaan inay ka hortagaan saameynta. Waqtigan xaadirka ah, doorashadaada keliya ayaa laga yaabaa inay isticmaalayso NMN dheeri ah. Rugaha caafimaadku waxay kugu dhiirigelinayaan inaad qaadato cuntooyinka NMN-ka ah sida broccoli, boqoshaada, edamame, ama gawaarida. Si kastaba ha noqotee, cuntooyinkaan waxay bixin doonaan oo keliya wax ka yar 5% waxa jidhku u baahan yahay.
FDA waxay ku talinaysaa in qof kastaa uu u baahdo qiyaastii 560mg ee NMN maalintii. Adiga oo ah inaad ka hesho kaalmada dheeriga ah ee "broccoli", waa inaad isticmaashaa miisaanka 1500 ee isku mid ah.
(2) NMN Caawinaad
The budada nicotinamide mononucleotide budada waxaa laga heli karaa iibka badi farmashiyaha iyo daawooyinka daroogada ama shaybaarada. Haddii aad rabto qaar ka mid ah cilmi-baaristaada, waxaad sameyn kartaa amar baaxad leh, oo ku yimaada sicir-dhimis iyo ka-dhaafitaannada maraakiibta maraakiibta.
Sameynta iibsiyada internetka ee NMN ma aha oo keliya badbaadinta wakhtigaaga laakiin sidoo kale waxay bixisaa heer aad u fiican oo lagu barbardhigo qiimaha kala duwan. Haddii aadan ahayn cilmi baaris, waxaad weli iibsan kartaa Nicotinamide Mononucleotide supplements isticmaalka shakhsi ahaaneed. Ka hor intaadan amar bixin, hubi inay tahay sheyga cuntada.
Waxay u egtahay caqli-galin si loo sheego in NMN ay sii dheereeyso nolosha dadka oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, caddayntaan ayaa kor u qaadeysa. Sababta dhimashada dadka waayeelka ah waxaa sabab u ah cudurada da'da soo-gaadhay, kuwaas oo ku yimaada natiijada hawlaha maskaxeed oo liita.
The antiotinamide Mononucleotide kaliya tallaabooyinka si loo wanaajiyo bixinta shidaalka gacanta iyo kor u qaadida shaqooyinka unugyada. Waxay ku dhaqmaysaa kor u qaadista NAD +, taas oo u egtahay inay hoos u dhacdo marka aan da 'nahay.
Isticmaalka kiriimyada maqaarka ee gabowga, qoyaanka, muraayadaha qorraxda, ama ku qabashada jimicsiyada joogtada ah ee cunto caafimaad leh ayaa laga yaabaa inay kaliya beddesho wajigaaga. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad fahamto sababaha asaasiga ah ee dhibaatooyinka da'da ah si ay ula macaamilaan si gooni ah. Nikotinamide mononucleotide waxay soo celinaysaa habka gabowga iyada oo la dayactirayo DNA-ga waxyeelada leh, ilaalinta maskaxda, habka wadnaha, hagaajinta hawlaha muruqyada, iyo kor u qaadida dulqaadka.
Haddii aad rabto budada dufanka nicotinamide mononucleotide, nala soo qaado oo ku raaxee sicirrada qiimaha leh.
RAW NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE (NMN) QAADKA (1094-61-7).
2.Dhaxdhaca 'Nicotinamide Mononucleotide' (NMN)
3.Nicotinamide Mononucleotide iyo NAD +
4.Badhitaankii ugu dambeeyay ee Nicotinamide Mononucleotide Ka shaqee Jiirka
5.Faa'iidooyinka laga helo Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
6.Ma Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ayaa runtii ka shaqeeya dadka?
7.Sidee Loogu Isticmaalaa Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ee Looga Hortago Gabowga?
8. Saamaynta Dhinac ee Nicotinamide Mononucleotide Waa inaad ogaataa
9.Halkee baan ka heli karaa Daawooyinka Gabowga-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)?